★မြန်မာ့အလင်း★: မွေးကင်းစ ကလေးငယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မိုဟာမက်သင်ကြားချက်
မွေးကင်းစ ကလေးငယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မိုဟာမက်သင်ကြားချက်
ဒီဗီဒီယိုကလဲ အရှက်မရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ထပ်ပြီးပြောဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေအနေနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဗီဒီယိုကို လုံးဝ.. လုံးဝ.. လုံးဝ မကြည့်ပါနဲ့။ ကြည့်ရင် ခင်ဗျားကို ဘန်းပြစ်မယ်။
ဟေ့ခွေးမသားကုလားတွေပြောလေ ဟုတ်နေတယ်ပြန်မပြောဘူး လူစုတ်ပဲ့တွေ
ဗျို့ ကုလားကြီးဂေါတမရေ... မင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေက မင်းကို ခွေးမသားကုလားတဲ့...မင်းကတော့ သိရှာမယ် မထင်ပါဘူး... ချီးပန်းပြီး သေပြီဆိုတော့... ကြားရာအရပ်ကနေ သာဓုခေါ်လိုက်ပါဦးဗျို့ ကုလားကြီးဂေါတမ ရေးးးးးးးးးးးး။
မင်းနောက်လိုက်တွေက တော်တော်တုံးတဲ့ ကတုံးတွေပဲ...ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်မရှိသလောက် ဦးနှောက်လည်း မရှိဘူး... သူတို့ရေးထားတာကိုလည်းကြည့်ပါဦး...မွေကင်းစ ကလေးနဲ့ကာမစပ်ယှက်ခွင့်ပေးတယ်တဲ့ လုပ်ကြံလီဆယ်တာကိုတောင် လူလက်ခံချင်အောင် မလုပ်ကြံတတ်ရှာဘူး...မင်းကလည်း ဒီလိုလိမ်လည်လုပ်ကြံတာကို ဘာဖြစ်လို့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ မသင်ပေးခဲ့တာလဲ? အေးပေါ့ကွာ...မင်းက သင်ပေးနေစဉ်ကာလမှာပဲ ချီးတော်ပန်းပြီး ခွေးသေဝက်သေ သေသွားရရှာလေတာကိုး...ဖြစ်ရမယ်..ဖြစ်ရမယ်...ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမယ်...
အခုတော့ မင်းနောက်လိုက်ပြီး မင်းကို ပြန်ဆဲနေပြီ ခွေးမသားကုလားတဲ့...ကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လား အရပ်ကတို့ရေ...ပြီးတော့ မင်းက သူတို့ကို ငါ့ကို ကိုးကွယ်ကြလို့လည်း မပြောခဲ့ပဲနဲ့ မင်းကိုကိုးကွယ်ပြီး မင်းကိုပြန်ဆဲနေကြတယ်... မင်းက အဲဒါကိုဘေးတစောင်းလှဲ လက်ကြီးထောက်ပြီး ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေတာ ဘာလို့လဲ? အေးပေါ့ကွာ... တကယ်တမ်းတော့ မင်းက အသက်မရှိတဲ့ ရုပ်တုကြီး ပဲလေ...ဖြစ်ရမယ်..ဖြစ်ရမယ်...ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုးကွယ်ပြီး ကိုယ့်ကို ပြန်ဆဲနေတာကိုတောင် ဘာမှမလုပ်နိုင်ရှာတဲ့ မင်းလို ရုပ်တုမျိုးကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ငတုံးတွေနဲ့ကတုံးတွေကို ငါတော့ တော်တော်အံ့သြတယ် ကုလားကြီးဂေါတမရယ်...
အေးပေါ့ကွာ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုတောင် မရှိပါဘူးဆိုပြီးငြင်းနေတဲ့ ငတုံး၊ကတုံးတွေဆိုတော့လည်း မင်းလို ကိုယ့်ကိုကိုက်တဲ့ ခြင်တောင် ကိုယ်ကမရိုက်နိုင်တဲ့ မသာတော် အသုဘတော် အလောင်းတော် ရုပ်တုတော်ကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်များ ဂရုစိုက်နေကြပါ့မလဲ...ဖြစ်ရမယ်...ဖြစ်ရမယ်...အဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်။
ဟေ့ကောင်ပြောမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားချင့်ချိန် လေ့လာ တွေးတောပြီးမှ ပညာရှိပီပီ ပြော.. လူ့စရိုက် လူ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်ကြံဖို့ ကြိုးစား.. ကြားလား? မင်းလို ခွေးလောက်မှအဆင့်မရှိတဲ့ကောင်မျိုးနဲ့ လူစကားနဲ့ မတန်ပါဘူး...ဒီလောက်နဲ့ပဲ လုံလောက်ပြီ။
မကျေနပ်ရင် ကတုံး၊ငတုံးတွေကိုပါ ခေါ်ပြီး ငါ့ဆီလိုက်လာခဲ့ ဟောဒါ မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေအတွက် မရဏ သေမင်းရဲ့အကောင့်ပဲ kothat.1982@gmail.com.